‘Produce X 101’ မှာ MC အဖြစ်မြင်တွေ့ရတော့မယ့် မင်းသားချော Lee Dong Wook – Trend.com.mm
Posted on March 5, 2019 March 5, 2019 by Noel
အခုလတ်တလော မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကြား “ဦး”ဆိုပြီး ပြန်လည်ရေပန်းစားနေတဲ့သူကတော့ တောင်ကိုရီးယားမင်းသားချော
Lee Dong Wook ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေခပ်စိပ်စိပ်ပြန်လုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Lee Dong Wook ဟာ ‘Produce X 101’ ရဲ့ MC အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်။
မတ်လ ၄ရက်နေ့က Mnet က သက်ဆိုင်သူတာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်က သူတို့ဟာ “Produce 101” အစီအစဉ်ရဲ့ Fourth Season ကို စတင်ရိုက်ကူးနေပြီ
ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာ Lee Dong Wook ဟာ MC အဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။Lee Dong Wook ဟာ Jang Geun Suk ၊ BoA ၊ Lee Seung Gi တို့ပြီးရင် ‘representative of the nation’s producers’ အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့လေးယောက်မြောက်အနုပညာရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူ MC အဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ့် “Produce 101” အစီအစဉ်ဟာဆိုရင် ဒီပထမနှစ်ဝက်အတွင်းပြသမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလတ်တလောမှာဆိုရင်တော့ Lee Dong Wook နဲ့ Yoon In Na တို့တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ “Touch Your Heart’ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးက ပရိသတ်တွေကြားထဲ အတော်လေးလူကြိုက်များရေပန်းစားလျက်ရှိနေတာပါ။ပရိသတ်ကြီးရော သူ့ဇာတ်ကားလေးကြည့်ဖြစ်ရဲ့လား?
အခုလတျတလော မိနျးကလေးပရိသတျတှကွေား “ဦး”ဆိုပွီး ပွနျလညျရပေနျးစားနတေဲ့သူကတော့ တောငျကိုရီးယားမငျးသားခြော
Lee Dong Wook ပဲဖွဈပါတယျ။အနုပညာလှုပျရှားမှုတှခေပျစိပျစိပျပွနျလုပျနပွေီဖွဈတဲ့ Lee Dong Wook ဟာ ‘Produce X 101’ ရဲ့ MC အဖွဈသတျမှတျခွငျးခံခဲ့ရပွနျတယျလို့သိရပါတယျ။
မတျလ ၄ရကျနကေ့ Mnet က သကျဆိုငျသူတာဝနျရှိသူတဈယောကျက သူတို့ဟာ “Produce 101” အစီအစဉျရဲ့ Fourth Season ကို စတငျရိုကျကူးနပွေီ
ဖွဈကွောငျးကွညောခဲ့ပွီး အဲ့ဒီအစီအစဉျမှာ Lee Dong Wook ဟာ MC အဖွဈတာဝနျယူဆောငျရှကျရမှာပဲဖွဈတယျလို့ကွညောခဲ့ပါတယျ။Lee Dong Wook ဟာ Jang Geun Suk ၊ BoA ၊ Lee Seung Gi တို့ပွီးရငျ ‘representative of the nation’s producers’ အဖွဈရှေးခယျြခံရတဲ့လေးယောကျမွောကျအနုပညာရှငျလညျးဖွဈပါတယျ။
သူ MC အဖွဈဆောငျရှကျမယျ့ “Produce 101” အစီအစဉျဟာဆိုရငျ ဒီပထမနှဈဝကျအတှငျးပွသမှာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။အခုလတျတလောမှာဆိုရငျတော့ Lee Dong Wook နဲ့ Yoon In Na တို့တှဲဖကျရိုကျကူးထားတဲ့ “Touch Your Heart’ ဇာတျလမျးတှဲလေးက ပရိသတျတှကွေားထဲ အတျောလေးလူကွိုကျမြားရပေနျးစားလကျြရှိနတောပါ။ပရိသတျကွီးရော သူ့ဇာတျကားလေးကွညျ့ဖွဈရဲ့လား?
အမြဲတမ်းကြိုတင်အစီအစဉ်ချဖို့စဉ်းစားတွေးတောနေတာဟာ သင့်ကျန်းမာရေးကို ဒီလိုထိခိုက်စေနိုင်